Amashishini amancinci Ukhawulezisa | UBob Prosen
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndafunda kwaye ndakonwabela Ithiyori ye-Kiss Thela, Incwadi evela kuBob Prosen enika iingcebiso ezifanelekileyo kumashishini. Ubunkokeli kwishishini likaBob kunye neenkqubo zoqeqesho kulawulo ziye zonyusa intsebenzo kunye nenzuzo kwaye zatshintsha inkcubeko eSaber, Hitachi, Sprint, AT & T kunye namakhulu amashishini amancinci kwilizwe liphela.
Ukubonisana noqeqesho lukaBob ngoku kufunwa kakhulu-nali icandelo lwamva nje elivela kwi-MSNBC:
Wonke umntu uhlala ebuza indlela yokukhulisa ngokukhawuleza ukusebenza kunye nenzuzo kumashishini abo. Kubonakala ngathi wonke umntu ufuna ukwazi ezona zicwangciso zithathayo ukukhulisa ukuthengisa kwakho, ukunciphisa ukubuya kwabasebenzi kunye nokunyusa inzuzo yakho nokuba ithini imeko yezoqoqosho. Ndithumele uninzi lweengcebiso ezinikezwe nguBob okoko waqalisa ishishini lam kwaye ishishini liyachuma.
Mna noBob siye sahlala sinxibelelana kwaye wazama ukukhuthaza olu luhlu lukhethekileyo loqeqesho (Uhlala ehlawulisa i-10,000 yeedola kolu hlobo lwento, kodwa ufuna ingxelo ngenkqubo.)
Kule I-webinar yasimahla UBob uya kukufundisa ngokwakho:
Ukuseta iinjongo "ezilungileyo" zezona ndawo zintathu zibalulekileyo zeshishini lakho.
Ezona metric zibaluleke kakhulu zeshishini eziza kwenza ukuba ufezekise iinjongo zakho.
Uluvavanya njani ukusebenza kobunkokeli bakho. Ngaba unayo into efunekayo ukukhokela umbutho wakho ukufezekisa inzuzo engaqhelekanga?
Kwakhona, ndwendwela indawo jonga uqeqesho lwevidiyo. Emva kokubukela uqeqesho qiniseka ukuba ufika kuluhlu oluphambili lukaBob ukuze waziswe xa le nkqubo iphumeleleyo. Yiyo leyo, ndiyathemba ukuba uyalonwabela uqeqesho!
I-PS: Apha ngezantsi kwevidiyo unokuzikhuphelela iibhonasi ezikhethekileyo kunye nezimvo kuqeqesho.
tags: Ukulandelela umkhankaso we-analyticsUkukhangela imifanekisoIincwadi ZentengisoIvenkile yokuthengisa eselfowuni